ရိုဟင်ဂျာအရေး နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှု ဒေါ်စု တုံ့ပြန်ချက် နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
ရိုဟင်ဂျာအရေး နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှု ဒေါ်စု တုံ့ပြန်ချက် နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ 4.5
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ - ဘီဘီစီမြန်မာတီဗီ
ရိုဟင်ဂျာ သိန်းနဲ့ချီအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က မောင်းထုတ်တာတွေ၊ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုးမှ လက်သင့်ခံသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန် ဒုသမ္မတ ဝေဖန်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး ဘယ်နိုင်ငံကမှ ပိုမသိနိုင်ဘူးလို့ တုံ့ပြန်ပြောကြား၊
၄ နှစ်အတွင်း အစ္စရေးနဲ့ ဟားမက်စ် လက်နက်ကိုင်တွေကြား အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွား၊
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ထင်ထားတာထက် ကျဆင်း၊
ပြတိုက်ထဲက ဖျော်ဖြေရေး ဝေလငါးတွေ ပင်လယ်ထဲမှာ ပျော်ပါးနိုင်တော့မယ့်အကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေကို ရှုစားရမှာပါ။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် #အမေရိကန် #မိုက်ခ်ပန့်စ် #ရိုဟင်ဂျာ #ဂျပန် #စီးပွားရေး
Author — Ko Pyae
အမေစုရှင့် ၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ၊ အရမ်းချစ်တယ် ၊ အမေကျန်းမာအသက်ရှည်ပါစေ ။
ဒီလောက်သနားနေရင် ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ခေါ် ကျွေးထားလိုက် ပါလား usa😒😒
Author — Esther Shvr
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြန်ဖြေတာ ပြည့်စုံ နေပြီ ဘဲ...ကိုယ့်နိုင်ငံသာကိုယ် အဆင်ပြေအောင်နေကြပါ မကူညီချင်နေ သွေးမခွဲကြပါနဲ့ ဒါပါဘဲ
Author — Virgo Kite
ုဒို့မေမေ လဲ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ် ရတာမလွယ်ပါလား
Author — မေတ္တာဦးဆောင် သဲမောင်
BBC ဘာကြောင့် ဒုက္ခသည် စခန်းက ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေကို မမေးကြည့်တာတုန်း
သတင်း ဘက်လိုက်မှု ?
Author — Hein Zin
ယခု့နောက်ပိုင်ကစပီး ဒေါ်စုကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်တာတွေ ရင်ထဲမှာအဖြေတစ်ခု့ပေါ် လာတယ်ခြောက်ဆယ်ကျော်အမေအို
NLD ပိုပီးလေးစားလာမိတယ် ကိုချင်းစာကြပါ
Author — Soe Kyaw
အမေရီကန် နင်တို့ သနား နင်တိုပ အဲံဒီ ကုလားတေါ ခေါထားလိုက်လေ
Author — Marketing Inya
BBC သတင်းသမားတွေရေ ငါမလိုးကုလား မြန်မာစကားလဲမပြောတတ်ပဲ့နဲ့ သူတိုလုပ်ထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကိုလဲ နိုင်ငံတကာကို သတင်းမထောက်နဲ့အုံး
Author — ãŭñĝ pÿiñĝ
သူတို့မှာ မမြန်မာပြည်ကို နေဘို့ သူတို့သိနေတယ်။
Author — saw ni
တခါ ထဲပြောလိုက်မယ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ၊ ၊ မခံနဲ့၊
သူတို့ တွေက ပြောလို့ ရရင် ပြောကြွေးချင်ကြတာ ၊ တို့ တော့ အာရှသိက်ခါကျအောင်ဘယ်တော့ မှမနေဘူး ။
Whatashow, Bangalis. They claim one of Myanmar ethnic groups but they are speaking in bangali language . Shame on US. Shame on those media and organisations who take money from Muslim backup groups who are rich and can give money to them.
Author — abcdefgh8955
Many Western Medias and elites critisied the lady for her Rohingya policy, but I thought she is right asaleader of Myanmar, support you from China
ဟိုဟာ အရေးယူ ဒီဟာ အရေးယူ မျှတမှုမရိုဘူး အမေရိကန်
Author — monmon 2017
there are 5000 U.S Troops in U.S border to protect un document illegal immigrant ..
They said they are from Myanmar but the cannot speak any of Myanmar languagees. They are cheating. If you are intelligent, you should think about reasonable.
Author — so paka
BBC, please take all Rohingyas to UK! UK is better and safer for them than Myanmar.
Thanks over for you
Author — Soldier Of Allah
_မြန်မာခေါင်းဆောင် ပြောတာကို _*_Mike Pence_*_ အော် - သိနေလို ဒီလိုကမ္ဘာကို ဒုက္ခပေးလိုက်တာပါလား၊ တော်ပါသေး - ငါးစိမ်းသည်လို _*_I don't care_*_ မသုံးလိုက်တာ_
I would like to say that this American style we don't need follow to your ideas, USA you also still struggling and facing with illegal immigrants.
ဟောငျကောငျအုပျခြုပျရေးမှူး လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ဥပဒကေိုကာကှယျပွောဆို - BBC News မွနျမာ
မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် ငွေကြေးနဲ့ အကူအညီတွေ ဖြတ်တောက်ဖို့ ကုလ တိုက်တွန်း - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
မွတ်ဆလင်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စခန်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်- ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ...
အမေရိကန် နဲ့ တရုတ် ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲ အဆုံးသတ်တော့မလား နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်- - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ...
မြန်မာပြည် သွားလည်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့လို့ တွစ်တာCEO ဝေဖန်ခံရနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီမြန်မာတီဗီ...
အိုကျအကျဈအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျ ကဆြုံးသှားပွီ - BBC News မွနျမာ
အမေရိကန်သက်တမ်းဝက် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်- ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ပက် နဲ့ မက်ဘွတ်အဲ အပါအ၀င် တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ ကလစ် နည်းပညာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့ရဲ့ အမွမှု - ဘီဘီစီနဲ့ မေးမြန်းခန်း (အပိုင်း ၁)